Bixiye cadaadiska biyaha → Sidee bay u shaqaysaa? Sidee loo nadiifiyaa? • Sidee loo dejiyaa?
Bixiye cadaadiska biyaha, sharciyeynta miiraha iyo cabirka cadaadiska. Isbedelka cadaadiska biyo ka dhaca nidaamka biyaha badanaa waxay ka dhashaan, kuwa kale, inay ka yimaaddaan nidaam biyo ah oo si khaldan loo qorsheeyay ama dhaca habeenkii, marka biyo yaraanta ay sababaan kororka cadaadiska tuubooyinka, oo wax u dhimaya nidaamka iyo aaladaha ku xiran, kuna faafin kara isticmaaleyaasha kharash aan loo baahnayn.
Rakibaada qalabka biyaha keena waxay yareyn doontaa cadaadiska xad dhaafka ah ee biyaha, waxay ilaalin doontaa nidaamka cadaadiska mid joogto ah, sidoo kale haddii ay dhacdo isbeddelada cadaadiska gudaha, waxay gacan ka geysaneysaa badbaadinta biyaha iyadoo ka hortagaysa qulqulka xad-dhaafka ah, baabi'inta khatarta birta biyoodka iyo yareynta dhawaqa iyo dhawaaqyada ka soo baxa inta lagu gudajiro nidaamka biyaha.
Xakameeyayaasha cadaadiska biyaha gadaal ayaa laga dhajiyay mitirka biyaha i filterka biyaha xadhkaha korantada weyn. Waxaa sidoo kale lagu dhejin karaa aagagga tuubbooyinka kuleyliyaha iyo haamaha, si kastaba ha noqotee, xalkaan waxaa loo istcimaalaa oo keliya marka marinka isku xirnaanta ugu weyni suurogal ahayn.
Waxaa lagu dhejiyay ka hor iyo kadib kormeeraha tuubooyinka xirida, awood u siinaya dejinta iyo dayactirka ku xiga. Aaladda si toosan ayaa loo rakibay.
Eeg sidoo kale: Biyaha electrolysis
Baraha biyaha cabbiraa waxaa lagu dhejin karaa meelo kala duwan oo nidaamka biyaha ah:
golaha dhexe - mitirka biyaha kadib, waalka weyn iyo filter xadhkaha korantada weyn. Inta lagu gudajiro rakibida, xasuusnow qulqulka qulqulka qulqulka ka dambeeya hagaha iyo sida loo xirxiro maamulaha ka dib marka aad ku shubto nidaamka. Dejinta cadaadis salka u ah nidaamka oo dhan wuxuu badbaadiyaa biyaha.
kulanka golaha - khadadka sahayda ee kululeyaasha biyaha xiran iyo haamaha kaydinta, marka ujeeddada rakibidda biyo-tuuriyaha cadaadiska biyuhu ay tahay in laga fogaado furitaanka tuubada badbaadada haddii ay dhacdo isbeddelada cadaadiska hawlgalka. Tani waxay u oggolaaneysaa inta jeer ee firfircoonaanta kululeynta in la yareeyo.
mashquul - kaliya aagga kuleylka kuleylka iyo isticmaalka isku mar ee madaxyada leh heerkulbeegyada. Xaaladda buundada cadaadiska ayaa laga yaabaa inay halkan ka muuqato, taas oo sababi doonta furitaanka qalabka badbaadada. Xaaladdan oo kale, yareeyayaasha cadaadiska waa inay jaangooyaan socodka biyaha kulul iyo kuwa qabow.
- Nidaamyada sahaydatusaale ahaan dhismayaasha dhaadheer, ee loo maro nidaamka kor u qaadista cadaadiska halkaaso looga baahan yahay aagag cadaadis oo dheeraad ah. Yaraynta cadaadiska biyaha waxaa la isticmaalaa marka cadaadiska nasinta ee nidaamka uu dhaafo 5 baloog ama marka cadaadiska nasiinada korkiisa ka baxa tuubada amniga (tusaale, kuleyliyaha biyaha) uu dhaafo 80% cadaadiska furitaankiisa.
Cadaadiska biyaha ee dhuumaha waa in lagu waafajiyaa awooda aaladaha iyo nidaamyada lagu daro rakibaadda biyaha. Biyaha aad u sarreeya waxay sababi kartaa waxyeelo ama khaldan nidaamka, sidaa darteed biyo-wade cadaadis biyo ayaa lagu rakibay nidaamka biyaha.
Qeybta shaqada ee mid walba oo wax bartay waa mid gaar ah xuubka Masuul ka ah sida ay wacyigelinta cadaadiska biyuhu ugu shaqeeyaan nidaamka biyaha.
Markay xoog aad u xoog badan tahay kulaylka biyuhu way socdaan xuubka ku jira dhimista, gu'ga ayaa kor loo qaaday, kaas oo kordhiya shaabadda oo u oggolaanaya cadaadiska biyaha ee loo baahan yahay in la gaaro. Marka cadaadisku hoos uga dhaco heerka la dejiyey, gu'ga ayaa hoos u dhacaya, oo u oggolaanaya biyuhu inay socdaan.
Waxa jira xalal kala duwan, oo had iyo jeer adag, oo loo isticmaalo suuqa laakiin falanqaynta rmabda'a hawlgalka barasho biyaha mid walbana lama bedeli karo: diaphragm, shaabadda iyo baalka ayaa wada shaqeeya si ay cadaadiska bannaanka uga dhigaan mid nabdoon.
Had iyo jeer, iibsiga biyo-hayaha biyaha wuxuu noqdaa mid daruuri ah, maxaa yeelay isticmaalkiisa wuxuu ka ilaaliyaa nidaamka biyaha ka-guuldarrooyinka ka dhasha cadaadiska aadka u sarreeya waana habka lagu yareeyo luminta biyaha ee nidaamka.
Eeg sidoo kale: Biyo jilcinta biyaha
Baraha biyaha cabbiraa waxaa la isticmaalaa markay:
nidaamka cadaadiska hawlgalka ayaa ka sarreeya qiimaha la oggol yahay
cadaadiska kore ee ka soo baxa tuubada nabdoonku wuxuu ka badan yahay 80% cadaadiska furitaanka waalka
Isticmaalka rakibaadda xilli xilli ah ayaa laga yaabaa inay keento halis ku-meel-gaadh ah oo xad-dhaaf ah
cadaadiska nasan ee rakibida ayaa ka badan 5 baloog
Xakamaynta cadaadiska biyaha ayaa mudan in laga helo halka ay jirto cadaadiska shabakadQaybinta biyaha) aad bey ugu saraysaa warshadda ama qalabka ama waxaa ku dhici kara isbeddelada xilliyeed.
Eeg sidoo kale: Dib uga laabasho osmosis
Iibka waxaad ka heli kartaa aalado nashqado kala duwan oo laga sameeyay waxyaabo kala duwan:
Xaraash Waxay leedahay jir naxaas ah oo leh xiriiriyaal iyo kartoon hal-gabal ah oo leh mesh filter iyo shaabadaysan. Naqshaddan waxay u oggolaaneysaa gelinta in lagu saaro mesh difaac leh nadiifinta. Qaabka gebi ahaanba yareynta cadaadiska biyaha wuxuu ku dhex yaal xirmooyinka, marka dayactirku ma beddeli doono heerka cadaadiska.
Waxyaabaha birta ah ee birta jaban Kama adkaysi u leeyihiin geedi socodka burburka marka la barbar dhigo naxaasda. Kuwa dambe ayaa qaaliyoobaya, laakiin si fiican ayey u shaqeyn doonaan iyadoo la adeegsanayo biyo badan.
1 inch hoos u dhig cadaadiska biyaha, ¾ hoos u dhig ama 1/2 hoos u dhig cadaadiska biyaha waxaa loo xushay iyadoo kuxiran dhexroorka tuubada sahayda. Awoodda ay leeyihiin kuwa wax yareeyaa waa isku mid kuwa kuwa waaweyn, oo sida saxda ah loo xushay, waxay socon doonaan dhowr sano.
Biyo-cabbiraha cadaadiska biyaha filter waa xalka aad u wanaagsan ee ku rakibidda qalabka la'aantiis kale. Miiraha kasta oo la isticmaalay wuxuu ka ilaaliyaa rakibaadda waxyeelada farsamada iyo xitaa haddii ay waxyeello gaartay, beddelka dib-u-rogahu wuu ka sahlan yahay wuuna ka raqiisan yahay ka qaadista guuldarrooyinka dhammaan rakibaadda biyo ama beddelaadda aaladda ka shaqeyneysa. Waa muhiim in lagu sameeyo nadiifin joogto ah mesh filter-ka oo lagu rakibay korka baraha biyaha cadaadiska.
Bixiyaha cadaadiska biyaha ee cabbiraadda cadaadiska gudaha ama dibaddaba waxay sahlaysaa isticmaalka iyo kordhinta ku habboonaanta isticmaalka nidaamka biyaha, iyadoo si dhakhso ah loo akhriyo cadaadiska dhabta ah ee nidaamka biyaha.
Biyo-cabbiraha cadaadiska biyaha ee cabbirka filter iyo cabirka cadaadiska waa xallin guud oo aad u habboon.
Moodooyinka ka jaban ee nidaamiyaasha ayaa leh cadaadis sareeya oo warshadeed. Haddii aad dooratid qalabka biyaha qaaliga ah ee wax ku qiimeeya, waad hagaajin kartaa oo waad ku beddeli kartaa aagagga aaladda gacanta.
Eeg sidoo kale: Khamri cabdi
dib-u-dhiska cadaadiska biyaha ee castoramasida biyo-cabbiraha biyaha u shaqeeyosida loo nadiifiyo qalabka biyaha keenasida loo habeeyo qalabka biyaha keenasida loo rakibo biyo-hayaha cadaadiska biyahawaxa biyaha biyaha diraabiyo-cabbiraha biyahabadeecadaha cadaadiska biyahaBiyo cabbiraha cadaadiska 1 inji1/2 Biyo-cabbiraha cadaadiska biyahaBixiye cabbiraha cadaadiska biyaha ee ah 1/2 injiBaraha biyo-cabirka 2 inji3/4 Biyo-cabbiraha cadaadiska biyahaBixiye cadaadiska biyaha 3/4 oo leh cabbiraad cadaadisdib-u-dhiska cadaadiska biyaha ee castoramaqiimaha biyaha dib u soo celinta biyahanadiifiyeha cadaadiska biyahaBixiyaha cadaadiska biyaha waraabkabiyaha cadaadiska diraa herzdib u eegista cadaadiska biyaha ee dib-u-eegista herzbadeecada cadaadiska biyaha ee malabyadaBuugga dib-u-warshadeynta cadaadiska biyaha ee malab-biyoodkaBuuga tilmaamaha tilmaamaha cadaadiska biyahaBiyo cabbiraha biyaha sida ay u shaqeysoBixiye cadaadiska biyaha sida loo habeeyoBiyo-cabbiraha biyaha sida loo dejiyodareey merlin biyo cabbirahabiyaha cadaadiska u diraa obihagaajinta biyaha cadaadiska biyahaBiyo-cabbiraha cadaadiska biyaha filterBiyo-cabbiraha cadaadiska biyaha ee cabbirka filter iyo cabirka cadaadiskaBixiyaha cadaadiska biyaha ee cabbiraadda cadaadiskabadaha cadaadiska biyaha